Marwada Madaxweynaha Dalka Marwo Qamar oo ka qeyb gashay xuska 8-da Maarso oo xalay lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Marwada Madaxweynaha Dalka Marwo Qamar oo ka qeyb gashay xuska 8-da Maarso oo xalay lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO”
Marwada Madaxweynaha dalka Marwo Qamar Cali Cumar ayaa xalay ka qeyb gashay munaasabad lagu weyneynayay xuska maalinta haweenka adduunka, kaa oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Haweenka iyo horumarinta xuquuqda Aadanaha.
Munaasabadda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa kaloo ka qeyb galay Wasiirka Wasaaradda haweenka, Wasiirka Caafimaadka, Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda haweenka, xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka, ururrada haweenka heer Qaran iyo heer gobol, iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka.
Xafladda ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandigay suugaan iyo ruwaayado ka turjumaya ahmiyadda maalinta 8-da Maarso ay ugu fadhido haweenka.
Guddoomiyaha ururka Haweenka Gobollada Jubbooyinka Badra Cabdule ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin garab istaaga haweenka Soomaaliyeed, si ay u muujiyaan doorka ay ku leeyihiin siyaasadda iyo horumarka dalka.
Guddoomiyaha ururka haweenka Gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa xustay in haweenka ay soo mareen marxalado adag, iminkana ay diyaar u yihiin u adeegidda bulshada, si looga wada qeyb qaato horumarka dalka.
Guddoomiyaha ururka Haweenka Qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe ayaa tilmaamtay in Soomaaliya ay ka soo kabsaneyso dib u dhac ku yimid, waxaana ay ku baaqday in gabdhaha Soomaaliyeed looga baahanyahay inay u istaagaan ka shaqeynta midnimada Ummadda.
Xer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Axmed Daahir ayaa hoosta ka xariiqay in haweenka ay heli doonaan doorka ay ku leeyihiin garsoorka dalka.
“Waxaan balan qaadayaa, aniga oo kaashanaya inta ay talada igala dhexeyso in haweenku ay heli doonaan xaquuqda dhanka garsoorka, tan koowaad in aad arki doontaan gabdho Soomaaliyeed oo xeer ilaaliyeyaal ah, gobollada dalkana sidaas oo kale ayaan u qaadaneynaa si ay ugu doodaan xaquuqda dumarka” ayuu yiri Xeer ilaaliyaha Qaranka.
Xildhibaan Sacdiyo Carays Ciise Kaarshe ayaa haweenka Soomaaliyeed ku boorisay inay isgacan qabsadaan oo ay u istaagaan ka shaqeynta horumarka, iyadoo xustay in arrintaasi ay tahay midda kaliya ay dumarka guul ku soo hooyi karaan.
“Waxaan idin leeyahay ha la isgarabsado, waxaa jirta haween badan oo tabaya inay xuquuq ka maqanyihiin, marka aan noqonno dad isku duubaan oo leh aragti wax dhiseysa” ayay tiri Xildhibaan Sacdiyo.
Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo xuquuqda Aadanaha Sahro Cali Samatar ayaa sheegtay in sanadkan ay qorshaha ugu jirto sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa dumarka, taasi oo lagu dhiirigelinayo howlaha ay bulshada u hayaan.
“Waxaan idin balan qaadayaa in sanadkan uu noqda sanad aan ka tashano horumarka iyo tayada dumarka, waxaa kaloo idin balan qaadayaa in sanadkan 2015-ka uu noqdo sanadkii shaqo abuurka, TUUGSI DOONIMEYNO, Soomaalida waa ay ka faani jirtay tuugsiga” ayay tiri Wasiirka haweenka.
Marwada Madaxweynaha Dalka Marwo Qamar Cali Cumar oo soo xirtay xafladda ayaa ugu horeyn hambalyo iyo bogaadin u dirtay haweenka Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan munaasabadda 8-da Maarso awgeed, waxaana ay waalidiinta Soomaaliyeed ka codsatay inay gabdhaha wax baraan.
“Marka hore Hambalyo ayaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan, waxaan xukuumadda ka codsanayaa in wax laga qabto adeegyada caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka, maadaama ay ugu nugul yihiin dhibka, waxaan kaloo u mahadcelinayaa haweenka Soomaaliyeed ee xafladdan uga yimid gobollada dalka ciidankana waxaan leeyahay guuleysta, waayo la’aantii halkaan ma la isugu yimaadeen” ayay tiri Marwada Madaxweynaha Marwo Qamar.
Ugu dambeyntii xafladda ayaa waxaa bilado iyo shahaado sharaf la guddoonsiiyay qaar ka mid ah dadkii ka qeybgalay.
Sawir Qaade:- Ilyaas Jamaal
Tahriibayaal Soomaaliya ah oo ku dhintay shir baabuur
Nadaxweynaha Koonfur galbeed oo maanta gaaray Qansax-Dheere